Famotsiana omby :: Afaka vonjimaika ilay filohana mpandraharaha voampanga • AoRaha
Famotsiana omby Afaka vonjimaika ilay filohana mpandraharaha voampanga
Araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana momba ny raharaha famotsiana omby, tany Tsiroanomandidy dia nahazo fahafahana vonjimaika rehefa natolotra ny Fitsarana tany an-toerana, afak’omaly hariva, ny filohana fikambanana lehibe iray misahana ny fandraharahana omby ao amin’ny Faritra Bongolava.
Omby am-polony avy any Ambatomainty tonga tao Tsiroanomandidy, andro vitsy lasa izay no nampitsikafona ity raharaha famotsian’omby ity. Nahazo fahafahana vonjimaika izy rehefa natolotra ny Fitsarana, afak’omaly efa hariva. Milaza ny tsy ho kivy ireo nanao ny famotorana fa hanohy ary hanamafy ny ady amin’ny famotsiana omby satria io no voalaza fa isan’ny fototra mahatonga ny halatr’omby.
Raha tsiahivina dia efa nisy dokotera mpitsabo biby sy delege iray voarohirohy tamin’ity raharaha ity ary efa naiditra am-ponja, araka ny vaovao voaray hatrany. Ilay filohan’ny fikambanana mpandraharaha ity izany aloha no afaka vonjimaika.
Raharaha Soavinandriana Naiditra am-ponja ilay zandary nahafaty olona telo
Ahiahy vono olona Lehilahy hita faty teo an-tsisin’arabe
Fahaverezana vola an-tapitrisany Vehivavy mpampianatra karohina noho ny fivadiham-pitokisana
Loza voajanahary Nisehoana horohoron-tany mahery vaika tany Amparafaravola
Fitsidihana tany avaratra :: Hahazo fotodrafitrasa maro ny Faritra Diana